चिनियाँ टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दियो यस्तो जवाफ : पछि फर्किन सकिन्न ! | सुदुरपश्चिम खबर
चिनियाँ टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दियो यस्तो जवाफ : पछि फर्किन सकिन्न !
काठमाडौं ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ टोलीले मूल रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा चासो राखेको थियो। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछि फर्किन सकिने परिस्थिति नरहेको जानकारी गराएका थिए। ‘पार्टीभित्रैबाट संसद्को दुरुपयोग गरी अप्रिय दुर्घटना निम्त्याउने तयारी भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक चुनावमा गइसकेकाले नयाँ जनादेशबाट फेरि स्थिरताको बाटोमा नेपाल जाने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। पार्टीमा पुनः कुनै मिलन विन्दु निस्कन सक्छ कि ? भन्ने टोलीको अर्को जिज्ञासामा ओलीले नेकपा फुट नै नभएको बताए। ‘केही नेता आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाका कारण चोइटिएर गएका मात्र हुन्। यसलाई पार्टी फुटेको भन्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
लामो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुरा राखेका थिए। टोलीका सदस्य कम मात्र बोलेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सधँै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहेको विश्वास पनि भेटका क्रममा व्यक्त गरेको परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। राजनीतिक संवादका विषयमा भने उनले केही खुलाएका छैनन्। (annapurnapost.com बाट साभार)
बच्चालाइ धेरै चिया दिनु सहि कि गलत ?